Iinqwelo-moya zaseHawaii ezihambela eTom Bradley International Terminal e-LAX
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo-moya zaseHawaii ezihambela eTom Bradley International Terminal e-LAX
Iindwendwe ezisuka eHawaii zisuka kwi-LAX kufuneka zibekele bucala malunga nemizuzu eli-15 ukusuka kumgangatho wesithathu wokubala ngaphakathi kwiTom Bradley International Terminal iye kwiiWest Gates zayo ngendlela engaphantsi komhlaba.
Nge-12 ka-Okthobha, Iinqwelomoya zaseHawaii zihamba zisuka kwiTheminali yesi-5 kwaye ziqala ukwamkela abahambi kwiTheminali B kwisikhululo senqwelomoya saseLos Angeles.
Iindwendwe zeHawaiian Airlines ezihamba zisiya naseHawaii zisebenzisa i-LAX ziya konwaba sisixhobo sanamhlanje nesitofotofo.
IHawaii ibonelela ngemilo emithandathu yemihla ngemihla phakathi kwe-LAX kunye neIihawai Islands, kubandakanya inkonzo yemihla ngemihla ukuya e-Honolulu, kunye nenkonzo yemihla ngemihla kuKahului eMaui, eKona kwiSiqithi saseHawaii, naseLihue eKauai.
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziya kuba nekhaya elitsha eLos Angeles International Airport (LAX) ukuqala ngoLwesibini, nge-12 ka-Okthobha, xa isuka kwiTheminali yesi-5 kwaye iqala ukwamkela abahambi kwiTheminali B, ekwabizwa ngokuba yiTom Bradley International Terminal.
Iindwendwe zaseHawaii ezihamba zisiya naseHawaii ngeLaX ziya kunandipha indawo yanamhlanje kwaye ikhululekile enezinto ezininzi, ukutya okwandisiweyo kunye nokuthenga kunye nendawo yesango ebanzi.
Airlines eHawaii ibonelela ngemilo emithandathu yemihla ngemihla phakathi I-LAX kunye neIihawai Islands, kubandakanya inkonzo yemihla ngemihla kathathu eya e-Honolulu, kunye nenkonzo yansuku zonke eKahului eMaui, eKona kwiSiqithi saseHawaii, naseLihue eKauai.
"Siyayibulela inkxaso yeZikhululo zeenqwelo moya zeLos Angeles ekufuduseleni kwethu kwiTheminali B, eya kuthi inike iindwendwe zethu amava aphezulu nokuba ziqala ikhefu laseHawaii okanye zibuyele ekhaya, utshilo uJeff Helfrick, usekela mongameli wezokusebenza kwesikhululo seenqwelomoya. Airlines eHawaii.
"Xa iiHawaiian Airlines zingena kwikhaya lazo elitsha eWest Gates eTom Bradley International Terminal, abakhweli bazokonwabela enye yezona ndawo zala maxesha kunye nezobuchwephesha kwezobuchwephesha kwihlabathi liphela," utshilo uJustin Erbacci, umphathi we-Los Angeles World Airports. "I-LAX yaba yindawo yokuqala yokufika kwilizwekazi laseHawaii kwii-Airlines ngaphezulu kweminyaka engama-35 eyadlulayo, kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni nobudlelwane bethu obude obudibanisa iHawaii neSouthern California. ”
Iindwendwe ezisuka eHawaii zisuka I-LAX kufuneka ibeke bucala malunga nemizuzu eli-15 ukusuka kwindawo yokubala yomgangatho wesithathu ngaphakathi kweTom Bradley International Terminal iye kwiiWest Gates zayo ngendlela yangaphantsi komhlaba. Iindwendwe zaseHawaii ezifika e-LAX zivela eHawaii ziya kuthatha iibhegi ezitshekishwe kumgangatho wokuqala wempahla. Abahambi banokunxibelelana phakathi kweeGates zaseNtshona kunye neeTheminali 4-8 ngokusebenzisa ipaseji engenazintsholongwane ngaphandle kwesidingo sokucoca ukhuseleko olongezelelweyo.
URoberta Pittman uthi:
NgoDisemba 17, 2021 kwi-07: 06
Itheminali entsha yongeza phantse imayile kumgama ukusuka kungqameko ukuya esangweni. Ngeendlela zokuhamba ezimbini kuphela ebezingasoloko zisebenza. Andiyi kubhabha iHawaiian ukusuka kwi-LAX kwakhona.